Flybe akarasikirwa nemukana wakakosha wekubhururuka zvakare
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » Flybe akarasikirwa nemukana wakakosha wekubhururuka zvakare
nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Ireland Kuputsa Nhau • nhau • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Imwe Flybe Airlines yakadzikira yakarasikirwa nekondirakiti yakakosha iyo yaizoibvumira kumhanya nendege kuenda kuIreland.
Chakanga chiri kushamisika vhiki ino kuti iyo Aer Lingus yedunhu franchise yakaenda kuEmerald Airlines. Emerald Airlines mutakuri mutsva akagadzwa namuzvinabhizimusi weIreland Conor McCarthy.
Flybe anga ari mumwe wevazhinji vatakuri vemabhizimusi ekubhadharisa o kutora chibvumirano cheAer Lingus, Loganair naStobart Air, avo vaimhanyisa masevhisi vakamiririra Aer Lingus kwemakore gumi apfuura, vakafungidzirwawo kuve vakabatanidzwa.
Mureza weIreland, Aer Lingus muridzi weBritish Airways International Consolidated Airlines Group
Mukuru weStobart Air anga achitarisira chibvumirano chekuramba achimhanyisa masevhisi eAer Lingus kwemamwe makore gumi, mushure mekunge mutakuri aendeswa kuzotengeswa nemubereki akanyorwa, uyo anewo nhandare yeSouthend.
Ndege yakasungirirwa yakasundidzirwa mukutonga kutanga kwegore rino sezvo COVID-19 yakarova indasitiri yekufamba. Asi, kunyangwe denda iri risati rasvika, muna Ndira 2020 Flybe akadzivirira kutonga.
Ndege huru yeEuropean yendege yakaparara zviri pamutemo munaKurume, mushure mekunge gurukota raramba chikumbiro chemari inosvika zana remamirioni ($ 100m) nevaridzi vayo kusanganisira, Richard Branson weMhandara Atlantic.
Kudonha kwakaisa zvinopfuura zviuru zviviri zvemabasa pamutsara kuExeter-based airline.
IThyme Opco - kambani yakabatana kune vaimbova varidzi Cyrus Capital - yatenga zvinhu zvakasara zveFlybe munaGumiguru. Yakaronga kutangazve ndege dzepepuru muna 2021, kunyangwe iri padanho diki pane pakutanga.
Hazvizivikanwe kuti mangani mabasa achanunurwa pasi pezvirongwa zvitsva zveThyme Opco.
Iyo yendege yakashandira nzira 119 uye yakabhururuka vafambi mamirioni masere mugore rayo rekupedzisira rakazara. Bhizimusi guru raFlybe raishanda nendege dzekumba dzinobatanidza maguta eUK.